မဲသေရောဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
မဲသေရောဂါ သို့မဟုတ် ပလိပ်ကပ်ရောဂါ (Black Death)သည် လူ့သမိုင်း၌ အဖျက်စွမ်းအား အကြီးမားဆုံး ကူးစက်ရောဂါများအနက် တမျိုး ဖြစ်ကာ၊ ၁၃၄၇ မှ ၁၃၅၁ ခုနှစ်ထိ အာရှနှင့် ဥရောပရှိ လူသန်းပေါင်း ၇၅ မှ သန်းပေါင်း ၂၀၀ ထိ သေကြေပျက်စီးခဲ့ပြီး၊ ဥရောပတွင် အဆုံးစွန် မွှေနှောက်ခဲ့သည်။ ယာစီနီယာ ပက်စတိ ဆိုသော ဘက်တီးရီးယားသည် ပလိပ်ရောဂါ ကပ်ပုံစံ အမျိုးမျိုးကို ဖြစ်ပွားစေရသည့် အကြောင်းရင်းဟု ယုံကြည်ကြသည်။ မဲသေရောဂါကြောင့် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးတို့ ပြိုလဲကာ၊ ဥရောပသမိုင်းအပေါ် အကြီးအကျယ် သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သည်။
မဲသေရောဂါသည် ဗဟိုအာရှ (အလယ်အာရှ)၏ ခြောက်သွေ့သော လွင်ပြင်များတွင် မြစ်ဖျားခံပြီး၊ ထိုမှတဆင့် ပိုးလမ်းမကြီးကို ဖြတ်ပြီး ၁၃၄၃ တွင် ခရိုင်မီးယားသို့ ရောက်ရှိလာသည်ဟု ယူဆသည်။ ကုန်သင်္ဘောများတွင် အမြဲတစေ ကပ်ပါလာတတ်သော ကြွက်မဲများပေါ်တွင် နေထိုင်သော ကြွက်သန်းမဲများကြောင့် ဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန် ရှိပြီး၊ မြေထဲပင်လယ်နှင့် ဥရောပတလျှောက် ပျံ့နှံ့သွားသည်။
မဲသေရောဂါကြောင့် ဥရောပတိုက်ရှိ လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ အနီးစပ်ဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ သေကြေကြရသည်။ ခြုံရလျှင်၊ ၎င်းပလိပ်ရောဂါကြောင့် ၁၄ ရာစုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေသည် အနီးစပ်ဆုံး သန်း ၄၅၀ မှ သန်း ၃၅၀-၃၇၅ ထိ လျော့ကျသွားခဲ့သည်။ ထိုလူအရေအတွက်သို့ ပြန်ရောက်ရှိရန် ကမ္ဘာသည် နှစ် ၂၀၀ အချိန်ယူရသည်။ ၁၉ ရာစု ရောက်ခါနီးတွင် ဥရောပ၌ ၎င်းမဲသေရောဂါ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားလိုက်သေးသည်။
ယာစီနီယာ ပက်စတိကြောင့် ဖြစ်ရသော ပလိပ်ရောဂါသည် ဗဟိုအာရှ၊ ကာဒစ္စတန်၊ အနောက်အာရှ၊ မြောက်အိန္ဒိယနှင့် ယူဂန်ဒါတို့ ပါဝင်သော ဒေသအမျိုးမျိုးတွင် မြေအောင်း ကိုက်ဖြတ်စားသတ္တဝါများက သယ်ဆောင်လာသော သန်းများ ပွားများခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသော မြေလျှောက်ရောဂါ ဖြစ်သည်။ 
↑ ABC/Reuters။ "Black death 'discriminated' between victims (ABC News in Science)"၊ Australian Broadcasting Corporation၊ 29 January 2008။3November 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Health. De-coding the Black Death"၊ BBC၊3October 2001။3November 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Black Death's Gene Code Cracked"၊ Wired၊3October 2001။ 12 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BBC – History – Black Death။ BBC (17 February 2011)။
↑ Austin Alchon၊ Suzanne (2003)။ A pest in the land: new world epidemics inaglobal perspective။ University of New Mexico Press။ p. 21။ ISBN 0-8263-2871-7။
↑ Historical Estimates of World Population။ Census.gov။ 12 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wheeler၊ Dr. L. Kip။ The Black Plague: The Least You Need to Know။ Dr. L. Kip Wheeler။9August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jay, Peter (17 July 2000). "A Distant Mirror" 156 (3). Retrieved on 25 January 2018. Archived 25 July 2008 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဲသေရောဂါ&oldid=671687" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၄:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။